By administrator on	 February 9, 2021 अन्तरवार्ता, फोटो फिचर, बिचार, वित्तिय सचेतना, स्थानीय
समुदायको उत्कृष्ट वित्तीय सहकारी संस्था बनाउने सपना बोकेर हिँडेको २०५० सालमा स्थापित गैँडाकोट स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गैँडाकोट नगरपालिकाका विभिन्न ५ स्थानबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सहकारीले निम्न आयस्तर भएका समुदायलाई लक्षित गरी उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार र स्वरोजगारमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन सोही अनुरुपका कार्यक्रम तय गरी अघि बढिरहेको छ । कोरोना महामारीले विश्व प्रभावित भइरहेका सन्दर्भमा सहकारीको २८ औँ साधारण सभाबाट सहकारीको अध्यक्षमा पोषणराज सुवेदी चयन हुनुभएको छ । सहकारीको अबको योजनालगायतका विषयमा हामीले गैँडाकोट स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोषणराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, विजय खबरका लागि समाचार सम्पादक प्रेम क्षेत्रीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अबको योजना के बनाउनुभएको छ ?
मैले १७ वर्ष सहकारीमा बिताइसकेको छु । कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर मैले सहकारीमार्फत काम गरिसकेको छु । यसअघि म संस्थाको उपाध्यक्ष पदमा रहेर पनि काम गरिसकेको छु । यसलाई अहिले मैले अध्यक्ष पदलाई एउटा अवसरका रुपमा लिएको छु र त्यत्तिकै चुनौतीका रुपमा पनि लिएको छु । नेपालमा रहेका सहकारीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नाम कमाइसकेको सहकारीमध्ये यो सहकारी पनि पर्छ । योजनाका सन्र्दभमा अहिले यो नै भन्नु भन्दा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ । यहाँका उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । संस्था एउटा नीति, विधि र प्रविधिले सञ्चालित छ । त्यसैलाई टेकेर आधुनिकीकरण गर्दै सेयर सदस्यहरुलाई सर्वसुलभ सेवा पु¥याउनु नै मेरो मुख्य कर्तव्य रहन्छ ।
सहकारीको वर्तमान अवस्था र प्रगति कस्तो छ ?
गैँडाकोट स्वाभिमान सहकारीमा अहिले ९ हजार ८ सय सदस्य आबद्ध हुनुहुन्छ । कुल सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने १ अर्ब २७ करोड बढी रहेको छ । ११ करोड सेयरपुँजी पुगेको छ भने ९० करोडको हाराहारीमा बचत र सोही अनुपातमा लगानी पनि भएको छ । कोभिडका कारण सहकारीलगायत हरेक क्षेत्रमा केही न केही प्रभाव परेको छ । त्यसबाट हामी पनि प्रभावित बन्याँै र पनि हामीले गतवर्ष १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सफल भयौँ । कोभिडका कारण पेसा–व्यवसाय गर्न लालायित नदेखिएका कारण अहिले केही लगानी गर्न असहज बनेको छ । सम्भवतः यो केही समयपछि सहज बन्ला ।
सहकारीमा देखिएको मुख्य चुनौती के हो ?
सहकारी विभागले एक सहकारी एक सदस्य भनेको छ । सञ्चालक अर्को सहकारीमा भने छैनन् तर सहकारीमा दोहोरो सदस्यता छ । यसलाई एकाकार गर्नलाई एउटा चुनौती पनि छ । सदस्यलाई अन्य सहकारीको सदस्य त्याग गरी यहि सहकारीमा मात्र सदस्य बन्नका लागि आह्वान गर्दै अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । यी चुनौती पार गर्दै हामी अघि बढ्ने छौँ । हाम्रो संस्था हरेक हिसाबले केन्द्रविन्दुमा रहेको छ । अब हामीले भवन विस्तार गरी व्यापारिक कम्प्लेक्स राख्ने र उपभोक्ता सहकारीको अवधारणाका रुपमा लिएर अघि बढ्दै छौँ ।
स्थानीय तह अन्तर्गतको ठूलो सहकारीको पहिचान बनाएको त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त गरेका ख्यातिलाई कायम राख्दै यस्को साख र छवि बिग्रन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले यसवर्ष पनि एसियाली ऋण महासंघबाट प्रदान गरिने एक्सेस ब्रान्ड प्राप्त गर्नेछौँ । त्यो आधिकारिक रुपमा घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । यसले पनि पुष्टि गर्छ कि सहकारीले गर्नुपर्ने हरेक काम र गतिविधि पारदर्शी छन् । यसले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेको छ । यसले गर्नुपर्ने सूचकहरू पूरा गरेको छ । यति मात्र नभई हामी सहकारीको मर्मअनुसार नै निरन्तर काम गछौँ । एक्सेस ब्रान्डमात्र नभई त्यसभन्दा माथिको ब्रान्ड प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास रहनेछ र त्यो मापदण्ड पूरा गर्न हामी सञ्चालक र कर्मचारी लागिरहेका छौँ ।
नयाँ समिति बनेपछिको कार्ययोजना के छ ?
हामी भर्खरै निर्वाचित भएर आएका छौँ । हामीले यसअघि त्रिवर्षीय कार्ययोजना बनाएका थियौँ र सोही अनुरुप वार्षिक कार्ययोजना पनि बनाएका थियौँ । यसवर्षदेखि हाम्रो ४ वर्षे कार्ययोजना हुनेछ । त्यो कार्ययोजना बनाएपछि वार्षिक कार्ययोजना बनाउनेछौँ। त्यसो त हरेक वर्ष सहकारीले गर्ने काम साधारण सभाले पनि निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तय हुन्छन् । कोभिडका कारण केही कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ र पनि सोही अनुरुपको नीति लिएर हाम्रा कार्यक्रम तय हुन्छन् । कार्ययोजना बनाएर हामी अघि बढ्नेछौँ ।
सदस्यलाई आर्थिक रुपमा मजबुत बनाउने सवालमा कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले प्रत्येक सेयर सदस्यसँग भेटघाट, घरदैलो लगायतका कार्यक्रमबाट जनसम्पर्क गर्ने गरेका छौँ । सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षालगायतका कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ । हामीले मत सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ । उहाँहरुले सुझाव पेटिकामार्फत दिएका सुझावलगायतका कुरा हेर्दा सहकारीप्रति उहाँहरु सन्तुष्ट र खुसी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नै हो सहकारीलाई उत्कृष्ट गराउनुभएको र उहाँहरुको योगदान अमूल्य छ । हामीले पनि उपयुक्त सेवासुविधा दिन सकेका छौँ भन्ने लागेको छ । सदस्यहरुलाई हामी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । सोही अनुपातमा कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, उद्योगहरुमा लगानीको वातावरण बनाउँदै लग्ने छौं । उनीहरुलाई सहज होस् भन्ने हेतुले ब्याजदरमा पनि सहज बनाउँदै लग्ने छौँ । सदस्यलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउँछौँ ।
उपभोक्ता सहकारी, उपभोक्ता पसल या व्यापारिक कम्प्लेक्स के बनाउने बन्ने निचोडमा पुगिसक्नुभएको हो ?
यसभन्दा अघिल्ला सञ्चालक समितिले पनि यो विषयमा कुरा उठाउनुभएको छ तर कुन रुपमा भन्ने हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । उपभोक्ता सहकारी, उपभोक्ता पसल र व्यापारिक कम्प्लेक्स यी सबै विषयमा छलफल भएका छन् । यो सञ्चालक समितिले सबैको राय लिएर आवश्यकता के हो भन्ने निक्र्याैल गरेर सुरुवात गर्छ । कुन रुपमा जाने भन्ने मात्र हो । हामीले यसलाई कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउँछौं । यो छलफलकै क्रममा छ । यो कार्यकालमा सकरात्मक सुखद खबर सुन्न पाइन्छ । यहाँ रहेका सेयर सदस्यले जसरी पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्छ । त्यो उहाँहरुको पैसा बाहिर नजाओस्, आफ्नै सहकारीमा आओस् भन्ने हो । आफै मालिक बन्ने र आफैले उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।
Source – Vijaya Khabar Weekly paper